Nonlinear Optical Makristasi, Laser Makristasi - Dien
Cr4 +: YAG Makristasi
Nezve Dien Tech
Seye inesimba, yechidiki kristaro zvigadzirwa zvemakambani kambani, DIEN TECH inonyanya kutsvagisa, dhizaini, kugadzira uye kutengesa kweakateedzana eisina mutsara optical makristasi, laser makristasi, magneto-optic makristasi uye substrates. Yakanaka mhando uye kukwikwidza zvinhu zvinoshandiswa zvine mutsindo mune yakamisikidzwa yesainzi, runako uye maindasitiri misika. Kutengesa kwedu kwakazvipira uye zvikwata zveinjiniya zvine hunyanzvi zvakazvipira kushanda nevatengi kubva parunako nemaindasitiri akamisikidzwa pamwe nenzvimbo yekutsvagisa pasirese yezvinetso zvakaomarara zvakagadzirwa.
Yakakwira simba uye yakakwira simba laser tekinoroji uye seminar yekushandisa Nyamavhuvhu 26th-28th, 2021 Yakakwira simba laser yakavakirwa pasimba rayo uye simba mhedzisiro, zvakabatsira zvakanyanya mukusimudzira kwefizikisi, sainzi yezvinhu, hupenyu sainzi, simba sicience. A ...
CIOP 2021- Chikunguru 23-26,2021
CIOP Musangano wepagore une misoro yakazara pamusoro peopics uye mafotoni, yakatangwa muna2008 neChinese Laser Press, Shanghai Institute of Optics uye Fine Mechanics, Chinese Academy yeSainzi. ...
AgGaS2 kristalo 39 ° / 45 ° ultrafast yekushandisa yakafara spectrum kupfeka
AgGaS2 crystal 39 ° / 45 ° ultrafast application wide wide spectrum bemhapemha zvinobudirira kuiswa AgGaS2 kristaro 8 * 8 * 10mm isina kuvharwa AgGaS2 crystal 8 * 8 * 1mm coa ...